Xalliyaan Dhibaatooyinka ugu Wanaagsan ee Barashada Koorsada Tababarka - ITS Tech
Xalliyaan Dhibaatooyinka ugu Wanaagsan ee Barashada Koorsada Tababarka
Xalliyaan Dhibaatooyinka ugu Weyn Adiga oo leh Koorsada Tababarka TOGAF
Waa maxay TOGAF?
Koorsooyinka muhiimka ah ee Togaf:
Sida Loo Helo Shahaadada Waalidka:
TOGAF® waxay noqotey shahaadada jaahwareerka ee mihnadlayaasha si ay ula qabsadaan ganacsiga IT. Nambarku wuxu naftiisa ku hadlaa tirada sii kordhaysa ee dadka helaya shahaadada sanadka oo dhan aduunka. Waa mid kooban oo loogu talagalay "Qaab dhismeedka 'Open Architecture Architecture Framework' - Waa habka loo yaqaan" industry architecture "-ka iyo qaabka loo adeegsan karo shaqada EA waxaana loo isticmaalaa guud ahaan Qaar badan oo ka mid ah xirfadlayaasha IT-ga Architects iyo la-taliyeyaal ururo kala duwan. Jidhka aqoonta waa mid faa'iido leh, waana in loo baahan yahay xirfad kasta oo IT-ga ah oo u dejiya marxaladda guusha ay ku gaarto isbeddelka ganacsiga. Badankood ganacsiyada iyo isbeddelka isbeddelka dijitalka waxay u baahan yihiin aqoonta aqoonta in la hubiyo in dadka masuulka ka ah hawlahaas ay fahmaan isbeddelka isbeddelka halka dadka isku dhafan, habka iyo xirfadaha tiknoolijiyada ee qaybta saxda ah ay xaqiijin karto guusha.TOGAF® 9.1 Foundation (Heerka 1) &TOGAF® 9.1 Shahaadada la aqoonsan yahay (Heerka 2)Tababarka Solutions Technologies Innovative waa xalka ugu fiican ee shirkad tababar ah oo leh xarumo Tababarka oo si fiican u qalabaysan Gurgaon oo dhan oo ku yaala India.
Agility and Architecture waa labada taago ee ururradaada ka dhigaya inay hore u socdaan marka loo eego dheelitirka. Waa maxay miisaanka saxda ah ee ay u leeyihiin inay u shaqeeyaan ururkaaga? Sidee ayaad u dheelitirin kartaa isla waqti isku mid ah markaad gaadhayso natiijooyinka ganacsiga, isbeddelka iyo xitaa si fudud u dhigma ururkaaga ujeedooyinka Tigirka ah. Aqoon-is-weydaarsiga ayaa ka caawin doona inuu fahmo sida loola tacaalayo labadan arrimood ee ururada.
Qeexidda TOGAF: TOGAF qaab ahaan qaab ayaa loo sharxi karaa iyadoo gaaban habka loo adeegsan karo mid si loo maareyn karo maaddadaada markaad ka soo guurto AS IS si aad u noqotid gobolka. AS wuxuu noqon karaa wax horumar ah oo ka imanaya meheradahaaga hadda IT. Waxaad joogi doontaa meel kasta oo ka mid ah safarkaaga ganacsiga si aad u dhamaysato hawshaada iyo sida aad u tegi lahayd si aad u hesho dhammaan agile daryeel oo aadan isha ku haynin qiimaha iyo qiimaha.
Waxaa loo yaqaanaa waayo-aragnimadu ma jirto xayiraad lacag ah oo lagu beddelayo is-beddelka Tiknoolajiyadda, macaamil walba waxaa loo qaadan karaa inuu yahay kiis wax-barasho. Baaxadda weyn ee faylalka, ayaa ka sii adag in ay tahay jacket si toos ah koox. Waayo-aragnimadu waxay timaaddaa iyadoo la socota macaamilka. Tababarka Wadada ayaa ku tababbaraya Dhibaatooyin badan ayaa soo kordhi doona aqoon-is-weydaarsiga aqoon-is-weydaarsiga ee shirkadda Eturnti Consulting iyo markhaatiyadayada markhaatiga.TOGAF waxay soo bandhigaysaa dhuxusha si hab-raac ah oo ah ururada qaan-gaadhka ah ee loo adeegsaday sidii la isku dayey oo loo tijaabiyey waxqabadka ugu wanaagsan uguna guuleystay. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha ku jira liiska hantida waxay u adeegsadeen si ballaadhan oo loogu talagalay inay ku habboonaadaan xargo iyo xalliyaan dhibcahooda xanuun, arrimo.
Kadib qaadashada koorsada Tababarka Wadada, Waxaad heli doontaa bogsiin si aad isugu qorto dhaqdhaqaaqa sida habdhaqanka ula xidhiidho. Aad waxtar u leh xalka naqshadeynta, dhismaha ganacsiga marka aad la socoto wadadaada xirfadeed iyo sida loo isticmaalo habka Togaf EA qaab ahaan. Aqoonta dhabta ah ee TOGAF 9.1 ayaa kaa caawin doonta inaad ka tirtirto Shahaadada TOGAF oo aad noqotid TOGAF 9.1 Certified Architect. Daraasad farsamo ayaa ku socon doonta koorsada kaa caawin doonta inaad hesho dhinaca farsamooyinka ah ee isticmaalka iyo habaynta TOGAF 9.1 ee ururkaaga
Daraasad farsamo ayaa socon doonta inta lagu guda jiro koorsada si loola xiriiro fikradaha tusaalooyinka nolosha dhabta ah sida iskudubarro leh xujooyin, waraaqo iyo maqaalyo marka laga reebo kalfadhiyada dhaqdhaqaaqa leh ee lagu celinayo barashada inta lagu jiro kalfadhiyada si ay u sameeyaan khibradaha baraarujinta.
Tababarka Togafka Boqolkiiba ka mid ah musharaxiinta ayaa aad u sarreeyay, imtixaanno badan oo tijaabo ah iyo kulanno isku-dhafan ayaa soo gudbin doona musharraxa si ay si wanaagsan u diyaargaroobaan si ay u tirtiraan shahaadada kalsoonida.
Sababta oo ah qaabka TOGAF loo isticmaalo in lagu midoobo IT & Business